» Qeybtii Koowaad Qiso Yaab Badan ‘Qalbi Adakaa’ Iyo Qalinkii Sheekh Maxamed Idiris..
Qeybtii Koowaad Qiso Yaab Badan ‘Qalbi Adakaa’ Iyo Qalinkii Sheekh Maxamed Idiris..
May 1, 2016 - 1 Jawaab
Qisadani waa mid ka mid ah, qisooyinkii ka dhici jirey wadankeenna waayadii ay Dawladnimadu jirtey.. Waxaad moodeysaa (movie) Hollywood lagu soo farsameeyey, laakiin maaha filim, ee waa wax dhacay, in kastoo (movie) laga samayn karo hadii ay Soomaalidu farsamadaa dad ku hormaray ahaan lahaayeen.
Waa qiso muujineysa, sida labadii sheeko ee ka horreeysey, marka Dawladnimadu awood leedahay, lana bar bar dhigo marka ay Dawladnimadu daciifto ama la waayo.
Waayadii ay Soomaalidu Dawladda lahayd, sida badan ma fakan jirin qof qof dembi weyn bulshada ama muwaadinka ka galay, haba tabar yarayso sanadihii dambe oo ay gaareeh nabarra badan oo gudaha iyo dibadaba uga yimi, shisheeye iyo xigaalaba dubbaha ay la dheceen.
Hayeeshee mar walba Dawladi wexey ahayd tii masuuliyadeeda wax ka gudata, waxaana ka mid ahaa (qiimaha) uu lahaa muwaadinka Soomaaliyeed iyo sida loo ilaalin jirey dhiigiisa! Ma ahaan jirin xaalku sida maanta uu yahay, nin kasta oo bulshada qiima u leh inta ladilo, weliba lagu faano, haddana dhagar qabayaashu fakadaan..
Hadaba aan sheekada bilaabee, Haweeney Soomaaliyeed ayey nin isku guursadeen deegaan ka mid ah deegaanada Soomaaliyeed. Waa qof qurux badan, da’ yar, fur furnaan, hawlkarnimo iyo aftahamo arag wanaagna ay u dheertahay.
Yeel kadeedee, dhanka kale wexey ahayd qof dhagar badan, wadnuhu bir yahay, waxa ay dooneyso wada kasta u qaadeysa.. Waana astaamo aan la mahadin.
Ninkii wexey u dhashay 2 gabdhood oo caloosha isu banneeyey. Muddo hadii la wada joogey, asey qoftaa kululna ahayd, maalinkii dambe ninkii hays qabtaan. Waa qof gacanteedu taagantahaye, ninkii dheri biya kar karaaya ku jiraan dusha ha uga shubto, ma dhiman oo Ilaahay ayaa bixiyey, laakiin dhaawacya adag ayaa gaarey, iyana dalqadeedi ayuu ugu malaq siiyey!! Eebow naagta ninkey labada u dhashay biyaha dabkaa ugu qubaysey, mexey soo waddaa?!
Guurkaasu halkaas ayuu ku bur buray, hayeeshee haweeneyda aynu ka sheekayneynaa waa mid rag u wada hawoodo haduuba sheedda kore ka arko! Ragna dumar wax loo saar, middii dhaban soo jiidasha lihina kuma sii jirto. Mexeyse wanaagsan tahay in guurkaaga loo meel dayaa!
Iyadoo labadii gabdhood oo yar yar wadata, deegaankii ha ka soo diga bedelato. Meel cusub iyo dad cusub ayey lasoo deristey. Dalku waa nabad oo seeftii kacaanka ayaa galka ka baxsan.
Xoogaa hadey magaaladii cusbayd ku hoyatey, nin oday ah oo iska ladan, dhulal fiican iyo goofaf leh, ayey kulmeen, quruxdeeda iyo garoobnimada da’da yar ayaa soo jiidatey. Odagu guurar badan ayuu soo maray laakiinse durriyad ma yeelan.
Carmalidan cusub ee deegaanka kusoo korodhay haduu bidhaansaday, kuna soo dhowaadey oo ay wada hadleen waa qof naftu u hawooto ama uba hiyi kacdo. Iyaduna maadaama ay odaga ilaalaysay shabaagtii ayey ku ag tuurtay, maba uusan daahine aa yar buu ku soo dhacay.
Aroos baa la dalaq yiri, Aqal baa la wada galay, hablihii yar yaraana aabe labaad oo fiican ayuu u noqday, iyadu waa sidey dooneyseye Odaga xoolihiisii ayey gacanta ku qabatay, waxaa doonto bixi waxaa doonto hay ayuu amarkiisu noqday!
Sanado hadii sidaa lagu wada joogey, ubadna aanu kusoo kordhin, gabdhihiina gashaantima noqdeen, Odagana Aabe ugu yeeraan, da’diisuna xoogaa weynaatey oo lixdankii madaxa la gashay, haweyneydii hawa sheydaan ayaa gashay. Waa xinjira Quudato horay u cuntay saygeedii hore. Wexey sheeko la yeelatay niman kale oo saraakiil ah, wexeyna bilawday qorshayaal ay Odaga kaga takhalusto.
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/kobciye/public_html/wp-content/themes/KaLaFogeTemp/single.php on line 440
Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/kobciye/public_html/wp-content/themes/KaLaFogeTemp/single.php on line 444
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/kobciye/public_html/wp-content/themes/KaLaFogeTemp/single.php on line 459
« Warbixinta Ka HoreysayIn Badan Ka Barro Noocyada Farruuryaha Dumarka Iyo Waxyaabaha Aay Ka Kala Turjumayaan..
HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Hal Jawaab : Qeybtii Koowaad Qiso Yaab Badan ‘Qalbi Adakaa’ Iyo Qalinkii Sheekh Maxamed Idiris..
Zakia says:	May 1, 2016 at 9:03 pm	Xasbunalaah wanimcawakiil!!!
Leave a Reply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website KUSOO BIIR BOGGEENA FACEBOOKA